Fihenam-bidy manokana amin'ny OnePlus 5T ao Banggood | Androidsis
Raiso ny OnePlus 5T miaraka amin'ny fihenam-bidy manokana ao amin'ny Banggood
Ny iray amin'ireo fitaovana miavaka amin'ity fararano ity dia ny OnePlus 5T. Ny haavo farany ambony an'ny marika sinoa dia tonga teny amin'ny tsena te-hijoro amin'ireo mpifaninana aminy. Izy io dia fitaovana miaraka amin'i andinin-teny mahery ary manana ny zavatra rehetra hamidy tsara izy io. Ankoatry ny vidiny ambany noho ny telefaona finday avo lenta Avy amin'ny tsena.
Fa ity ny vidiny dia azo jerena na dia ambany aza noho ity fampiroboroboana manokana ao amin'ny Banggood ity. Mitondra antsika ny magazay malaza ny OnePlus 5T miaraka amin'ny fihenam-bidy tokana amin'ny kinova roa. Na izany aza, fampiroboroboana voafetra izany. Holazainay aminao ny fomba ahazoanao tombony amin'izany eto ambany!
Efa fantatry ny maro aminareo, kinova roa no navoaka manomboka amin'ny fitaovana mankany amin'ny tsena. Ny iray amin'izy ireo miaraka RAM 6 GB sy fitehirizana 64 GB anatiny. Raha ny iray kosa RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB anatiny. Samy misy. Ankehitriny, Banggood dia mitondra fihenam-bidy amin'ireto kinova roa amin'ny OnePlus 5T ireto.
1 OnePlus 5T (RAM 8 GB - fitehirizana 128 GB) - Fihenam-bidy $ 53,6
2 OnePlus 5T (RAM 6 GB - fitehirizana 64 GB) - Fihenam-bidy $ 50,49
OnePlus 5T (RAM 8 GB - fitehirizana 128 GB) - Fihenam-bidy $ 53,6
Ny voalohany amin'ireo kinova roa amin'ny fitaovana amin'ny fampiroboroboana dia ilay misy a fampitomboana RAM sy fahafaha-mitahiry anatiny. Ity kinova an'ny OnePlus 5T ity dia mety ho an'ireo izay mitady telefaona mahery ary manana toerana fanampiny ho an'ny sary na horonan-tsary. Ka raha mpampiasa mampiasa telefaona ianao maka sary maro na andian-tantara, Tsy isalasalana fa safidy mety indrindra ny miloka amin'ity kinova ity.
El Ny vidiny voalohany amin'ity kinova OnePlus 5T ity dia $ 669,99. Ankehitriny, azonao atao izany $ 616,39. Mba hahazoana tombony amin'ity vidiny ity dia tsy maintsy ampiasainao ireto manaraka ireto code code: 12BGOP5TTG. Na dia tokony ho mailaka aza ianao, satria fampiroboroboana voafetra izany. Misy singa 100 ao amin'ilay fitaovana fotsiny misy. Ho fanampin'izay, manana ianao hatramin'ny 8 Desambra, fe-potoana farany. Azonao atao ny mividy azy eto.
OnePlus 5T (RAM 6 GB - fitehirizana 64 GB) - Fihenam-bidy $ 50,49
Ny kinova fototra indrindra amin'ny fitaovana, na dia amin'ity tranga fototra ity aza tsy midika hoe ratsy kokoa ilay fitaovana. Safidy lehibe hodinihina, nanomboka tamin'ity OnePlus 5T dia iray amin'ireo finday avo lenta tsara indrindra nahatratra ny tsena tamin'ity taona ity. Amin'ity tranga ity dia manana RAM tsy manana fahaiza-manao firy sy fitahirizana anatiny ambany izahay. Na dia mitohy aza manolotra fampisehoana mahatalanjona ary manana toerana mihoatra ny ampy ho an'ny sarinay sy ny horonan-tsary izahay.
El Ny vidiny voalohany amin'ity kinova OnePlus 5T ity dia $ 560,99. Ankehitriny, noho ity fampiroboroboana ao amin'ny Banggood ity dia afaka a vidin'ny $ 510,50. Raha te hividy ilay fitaovana amin'ity vidiny ity dia mila mampiasa an'io ianao code code: 12BGESOP5T64. Amin'ity tranga ity ny fampiroboroboana dia voafetra ho 400 unit. Manam-potoana ianao mandra-pahatongan'ny Desambra 8. Aza avela handositra izany! Ianao dia afaka mividy eto.
Ireo fifanarahana amin'ny OnePlus 5T dia vetivety, noho izany dia tokony ho mailaka ianao ary aza avela handositra. Saingy, tsy ireo ihany no tolotra omen'i Banggood antsika. Ilay magazay malaza dia efa tolotra an'arivony voaomana amin'ny Krismasy. Ka ny niantsena fanomezana dia tsy mora sy mora velively. Azonao atao ny manamarina bebe kokoa momba ny tolotra misy ao amin'ny magazay amin'ity rohy. Ahoana ny hevitrao momba ireo tolotra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Raiso ny OnePlus 5T miaraka amin'ny fihenam-bidy manokana ao amin'ny Banggood
Ahoana ny fomba hamoronana GIF Krismasy amin'ny tarehy tsy andoavam-bola!
Android Oreo Go: Ny kinova Android ho an'ny finday ambany